नेपाली दूतावास अबुधाबीको पहलमा यूएईमा नेपाली कामदारको १९ लाख जरिवाना छुट …. – Nepali Janata Khabar
नेपाली दूतावास अबुधाबीको पहलमा यूएईमा नेपाली कामदारको १९ लाख जरिवाना छुट ….
सोमबार २६ आश्विन, २०७७
युएई – जरिवाना तिर्न नसक्दा नेपाल फर्किन नपाएका १७ जना नेपाली कामदारहरुको करिब १९ लाख रुपैयाँ नेपाली दूतावास अबुधाबीको पहलमा मिनाहा भएको छ ।
पीसीआर गराउन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण काममा नेपाली समाज युएईका महासचिव वेदप्रसाद अर्यालले योगदान गरेको काउन्सिलर थापाले बताए ।
उनीहरू अक्टोबर ११, आइतबारको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट नेपाल फर्किसकेका छन् ।
यी २१ वर्षीय युवतीले गरिन् ला’जमर्दो ह’र्कत भिडियोभयो भाइरल
जुम्लाका स्याउ किसान वर्षेनी कालो तुषारो र खडेरीको मारमा
मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो ! चोखो मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ !